Sawiro: Wax badan ka ogow xaqiiqda kulankii Gaas iyo Peter De Clercq - Caasimada Online
Home Warar Sawiro: Wax badan ka ogow xaqiiqda kulankii Gaas iyo Peter De Clercq
Sawiro: Wax badan ka ogow xaqiiqda kulankii Gaas iyo Peter De Clercq
Madaxweynaha Dowladda Soomaaliyeed ee Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta oo Salaasa ah waxa uu madaxtooyada Puntland ee Garoowe ku qaabilay wafdi uu hogaamineyey ku-xigeenka xog-hayaha guud ee qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, Peter De Clercq.
Weftigan balaaran ee uu hogaaminayey Peter De Clercq ayaa waxaa ka mid ahaa Madaxa xafiiska (OCHA) Mr. Justin Brady iyo Agaasimaha ROLSIG (UNSOM) Mr. Staffa Tillander iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan Unsom iyo UNDP.
War ka soo baxay xafiiska Warfaafinta Madaxtooyada Puntland ayaa lagu sheegay in kulankan maanta uu Madaxweynaha Puntland la yeeshay Mr. Peter De Clercq ayaa waxaa uu ku saabsanaa arimaha bani’aadanimda iyo xuquuqda dadka tabaalaysan ee roobabka duufaanada wata iyo abaaruhu aafeeyeen, kuwaas oo roobabkii dabaylaha watay ee ku dhuftay soomaaliya iyo wadamo badan oo deriska ah barakac baahsan iyo waxyeelo u geysteen.
Mr. Peter De Clercq ayaa dhankiisa sheegay inuu soo maray gobolada waqooyiga Soomaaliya oo iyagana duufaanadii iyo roobabkii ka da’ay todobaadkii lasoo dhaafay khasaare baaxad leh oo naf iyo maal ahba u geysteen.
Sidoo kale Peter De Clercg ayaa sheegay inuu haatana Puntland u yimi sidii ay ugu kuudh geli lahaayeen xaalada dadka reer guuraaga ah iyo kuwa ku teedsan dhul xeebadka Puntland ee duufaanadii iyo roobabkii sanadku halakeeyeen, isla mar’ahaantaanaa ay wax uga ogaan lahaayeen xaalada bai’aadanimo iyo raadkii abaarahu ka tageen.
Warar madaxbanaan ayaa sheegaya in guddigan ka socdey Qaramada Midoobey ay labada dhinac ee Puntland iyo Somaliland kala hadleen xaaladda Tuakaraq, sidii xabbad joojhin loo sameyn lahaa si dadka baahan loo gaarsiiyo gargaarka ay u baahan yihiin.